မယ့်ကိုး: “ အိမ်မဲ့သူတေး ”
image credit:JULIE LEOPO, Voice of OC
စာရေးသူ မယ့်ကိုး at 10/10/2009 03:33:00 AM
မယ်ကိုး..အိမ်လေး ထဲမှာ..သတ္တိ တွေ ကျန်နေသေးတာ..လေးလေး..မြင်ပါတယ်....
10/10/09 3:36 AM
မယ်ကိုးရေ.. ခုမှပဲ စာပြန်ရေးတော့တယ်၊ မျှော်နေတာ
10/10/09 4:07 AM
မမကိုးရေ တော်တော်စိတ်ညစ်နေပုံရတယ် စာကိုဖတ်လိုက်ရတာ စိတ်မကောင်းပါဘူး မမရယ် ဘာ အားပေးစကားပြောရမှန်းတောင် မသိတော့ဘူးရယ် ကိုရီးယားကားထဲကလို အာဂျား အားဂျား ဖိုက်တင်းနော် ဟီးးးးးး(ကာရံဆူးမလာခင်ပြောထားမှ) အားတင်းထား မမရေ
10/10/09 4:52 AM
မမကိုးရေ စာလေးပြန်ရေးလို့လဲ ဝမ်းသာတယ်နော် မစနေတောင် မမ ကိုမေးနေတယ် မယ်ကိုး စာမရေးဘူးလားနဲ့ ဟီဟိ ညီမ နဲ့လောင်းမလား ဒီပို့စ်ကို သူ comment ပေးလိမ့်မယ် ကြည့်နေ ဟိဟိ
တာ့တာ ဘတ်လဘိုင် ဘတ်လဘိုင် ပြန်တော့မယ် စိတ်မကောင်းဘူး မမ လဲ စိတ်မကောင်းတော့ ညီမလဲ စိတ်မကောင်းဘူးပေါ့နော် ဟင့် ရွှတ် ဖတ် (ပိုထှာ ဒီဝက်မကလဲလို့တော့ တွေးတော်မမူကြပါကုန်)
10/10/09 4:55 AM
မမကိုးရေ အိပ်တော့မယ်နော် သိလား တာ့တာ ပို့စ်လေး အသစ်တင်တယ်ဆိုလို့ ပြေးလာတာ ၁ လဲအရဘူး ဟီးးးးး ဒါပေမယ့် ၁ ကနေ ၁၀ အတွင်းတော့ ဝင်တယ် ထင်တယ်နော် မမရေ သောင်းကျန်းသွားသလို ဖြစ်ရင် ခွင့်လွှတ်ပါ နော် ဂယ်လဲ သောင်းကျန်းသွားပါတယ် ချင့် ဟက် ခွီးးးးခွီးးးးး(တက်တာဟုတ်ဘူးနော် အဲဒါ ရီတာ ရီတာ) ဘိုင် တာ့တာ (ဘယ်နှကြိမ်ရှိပြီလဲ မသိဘူး နှုတ်ဆက်နေတာ ဟဲဟဲ)
10/10/09 4:56 AM
နင့် နဲ စွာ ခံစားလိုက်ရပါတယ် .။။
ဒါပေမယ့် ထရပ်နေတဲ့ အားတစ်စမှာ
မာကျောတဲ့ တစ်ခုခု တွေ့နေရတယ် .။။
အဲဒီ့ မျှင်မျှင်လေးကပဲ အရောင်လက်နေတယ် ..။
ငြိမ်းချမ်းနိုင်ပါစေသား ဗျာ ...။
ဒီသီချင်းကို သမီးလဲ အရမ်းကို ခံစားပြီး ကြိုက်ခဲ့တာလေ။
ဘာမှ မလုပ်ပေးနိုင်သလို၊ ပျော်ရွှင်အောင်လဲ ပြောမပြတတ်ပါဘူး။ မမြင်ဖူး မဆုံဖူးကြပေမယ့် ရင်ထဲက ညီအမ သံယောဇဉ်လေးကြောင့် ကိုယ့်အမ တစ်ခုခု ခံစားနေရတယ်ဆိုတာ ရင်ထဲအလိုလိုဖြစ်လာတယ်။ မကို ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။ အစစအရာရာ အဆင်ပြေပျော်ရွှင်ပါစေနော်။
10/10/09 7:08 AM
ဒီလိုမျိုးခံစားမှုတွေ လူတိုင်း တကြိမ်မဟုတ် တကြိမ် ခံစားဖူးကြမှာပါပဲ။ အမ နားလည်တယ်။ ခံစားလို့ရတယ်။ ဒီကွန်မန့်ရေးတာ ညီမလေး လက်ကို နွေးနွေးထွေးထွေး လာဆုပ်ကိုင်လိုက်တယ်လို့ သဘောထားပေးပါနော်။
10/10/09 7:45 AM
မ တို့က အလွမ်းအပါအ၀င်အရာရာအမြတ်ထွက်တယ်..
အဓိက စိတ်တွေ အကြောင်းပိုသိလာတယ်..
ဖြစ်လာသမျှ အခက်အခဲ အားလုံးကို သင်ခန်းစာပဲမှတ်ထားလိုက်တော့..ညီမ..
(ဒီလိုပဲဖြစ်အောင် ခေတ်ကဖန်တီးပေးခဲ့တာ။ ဒီလိုလာနိုင်အောင်ကြိုးစားနေကြတဲ့ လူတွေဟာ..လည်း..လက်ရှိလူငယ်ဦးရေရဲ့တစ်ဝက်တောင် ကပါ့မလားပဲ ကျန်နေသေးတယ်..။)
ရောက်တဲ့အရပ်မှာ တို့တွေ ဘယ်လိုမှပျော်အောင်မနေနိုင်ကြပေမယ့်
သီချင်းလေးကို နားထောင်။ စာသားလေးကိုဖတ်။ သီချင်းကို နောက်တစ်ခေါက် ထပ်နားထောင်ပြီး ကွန်မန့်ရေးဖြစ်တယ်။
အော် ဟားဟား အားပေးအောင်လာပါတယ်ဆို အတူတူငိုစရာပြောမိတယ်..
ပြန်စရာအိမ်မရှိရင် လာခဲ့ပါ.. အစ်မတို့ အိမ်က အမြဲကြိုနေတယ်။
ကြည်အေးရဲ့ နွမ်းလျအိမ်ပြန်ကို မနေ့တနေ့ကပဲ ဖတ်ထားတာ။
၀တ္ထုထဲက အတွေးတွေ၊ အရေးတွေက ကြည်အေးရဲ့ အတွေးလား၊ တင်မေရဲ့အတွေးလားလို့
ဒီပိုစ့်ဟာ မယ်ကိုးရဲ့အတွေးလား၊ သီချင်းကို ခံစားတာလား (သီချင်းနားထောင်လိုက်ပါအုံးမယ်)၊ အဖြေရှာကြည့်ပါအုံးမယ်။
(မရေးတာကြာပြီမို့ အလုပ်များနေမယ်လို့ တွေးနေတာ)
မမမယ်ကိုးရေ...လူဆိုတာ တစ်ယောက်တည်းနေရတာ ပိုပြီးငြိမ်းချမ်းမှုရှိတယ်...သို့ သော် နှလုံးသားမှာ ဘုရားတည်ထားရင် အရာရာ ပြည့်စုံကုံလုံ အေးငြိမ်းမှုကို ရမှာပါ...မမမှာ စိတ်ညစ်စရာတွေ အထီးကျန်တာတွေ သူများလက်အောက်မှာနေရတဲ့ စိတ်ကျပ်တည်းမှုတွေဟာ ဘုရားရှင်ကိုသာ တိုင်တည်လိုက်ရင် ခဏလေးနဲ့ ပေါ့ပါး လန်းဆန်းသွားမှာပါ...ကာရံလည်း အလုပ်မှာဆို အတိုက်အခံအရမ်းများတာ...သူများတွေစကားနားယောင်ပြီး ကိုယ့်ကို ညစ်တဲ့ သူဌေးကိုတောင် ကာရံက တိတ်ဆိတ်စွာ နေပေးခဲ့တယ်...ဘာမှ မဖြေရှင်းခဲ့ဘူး..အချိန်တန်တော့လည်း အလိုလို ပြန်နားလည်မှု ရသွားတာပါပဲ... လက်ကောက်ဝတ်ကို ဓါးနဲ့ လှီးမယ်ဆိုတဲ့ မကောင်းသော အတွေး မကောင်းသော အကြံဟာ ငရဲကြီးပါတယ် မမရယ်...အစ်မ ဘယ်လို စိတ်ကျဉ်းကြပ်မှုတွေပဲ ကြုံကြုံ အစ်မ အနားမှာ ဘယ်သူမှ မရှိပါစေ..ဘုရား အမြဲရှိပါတယ်...ယုံကြည်ထားပါနော်...အမြဲအားပေးနေမယ်...အစ်မမယ်ကိုး တစ်ယောက် သောကတွေပျောက် အေးငြိမ်းရောက်ပါစေ...
10/10/09 8:49 AM
အော်..၀က်ကလေးက ကာရံဦးမှာ ကြောက်တယ်လား..ဟားဟား..မကြောက်ပါနဲ့ ကွယ်..ကာရံဖျားနေတယ်..မနေ့ က သူများအိမ်မှာ မရစဖူး တစ်ရလို့ အပျော်ကျူးလို့ ထင်ပါရဲ့ ...ဒီနေ့ အစ်မမယ်ကိုးရဲ့ အိမ်ကို ပထမဆုံးလာလည်တာလေ...အစ်မရဲ့ မွန်းကျပ်မှုတွေကို မျှဝေယူသွားပါတယ်... အစ်မရယ် ကာရံတို့ ဟာ ဘ၀တူတွေပါ... ငါတစ်ယောက်တည်း မဟုတ်ဘူး ဆိုတဲ့ အချိန်မှာ စဉ်းစားလိုက်ပါ..ကိုယ်ရဲ့ ကံက ဆိုးတယ်လို့ ယူဆရင် ကိုယ့်ထက် ဆိုးတဲ့သူတွေကို ငုံ့ ကြည့်လိုက်ပါ...ဒါပေမဲ့ အစ်မမယ်ကိုးကို ကာရံ အပြည့်အ၀ယုံကြည်ပါတယ်...ဒီလောက် မပျော့ညံ့ပါဘူးလို့ ...နော်...
10/10/09 8:56 AM
အင်း အဆင်မပြေတာကတော့ လူတိုင်းပါပဲ ညီမရေ
ဒါပေမယ့်ပျော်အောင်နေတယ် ၊ မပျော်ပျော်အအောင် နေတယ်
အစ်ကို ခုတလော သဘောကျနေတဲ့ forward mail လေးရှိတယ် ညီမဖတ်ပြီးသားဖြစ်မှာပါ EGG , Carrot and OngLong Tea ဆိုတာလေးလေ
ဒီလိုပါပဲ ညီမရယ် ညီမစာလေးကို အစ်ကို နားလည် ခံစား နိုင်ပါတယ်
ညီမစာထဲက အိမ်လေးအကြောင်းတော့ အကြံမပေးတက် ပေမယ့်
တစ်မိုးအောက်မှာ နေသူချင်းချင်း အကြည့်ချင်းပင် မဆံဖြစ် ဆိုတာလေးလေ
ဒီမှာ အတူနေကြတာက သူငယ်ချင်းတွေ ညီအစ်ကိုမောင်နှမတွေ မဟုတ်ကြဘူးလေ သူ့အလို လိုက်မှ ကိုယ့်အလိုလိုက်လိမ့်မယ် ကိုယ်ပြုံးမှ သူပြုံးလိမ့် မယ် ၊ အသွားရှိမှ အပြန်ရှိလိမ့်မယ် ဒါလေးကတော့ ဒီမှာ အစ်ကို ခံစားရတာလေးပေါ့
ညီမမှာ သူငယ်ချင်းတွေ အများကြီးရှိတာပဲ ဟုတ်တယ်ဟုတ် ဘာအတွက် အထိးကျန်မှာလဲ
ညီမဘလော့မှာ ဆိုလူတွေ ကိုစည်နေတာပဲ သူငယ်ချင်း တွေ အများကြီး ဒါဘာလို့လဲ အဲဒါလေးကို Online ကနေ Offline ကိုပြောင်းလိုက် ပြောင်းပြီး ကျင့်သုံးလိုက် ညီမဘေးမှာ သူငယ်ချင်းတွေ ပေါမှပေါ ပါ
ဟာဟ ပြောချင်တာတွေ ပြောသွားတယ် စိတ်မဆိုးနဲ့နော် စိတ်ညစ်နေတယ်ဆိုလို့ ဆရာလာလုပ် တာ P;
အော် သိပြီ ဟီဟိ
ဘလော့ပိုင်ရှင် ဆီက ခွင့်ပြုမိန့်သွားယူတာကိုး
10/10/09 10:06 AM
ထပ်တူခံစားမိပါတယ်ဗျာ အားတင်းထားပါ ဒုက္ခဆိုတာ လိပ်စာမမူပဲ ကိုယ့်ဆီရောက်လာနေကြပါ . . . အားမလျှော့နဲ့
အားမလျှော့နဲ့ . . . . . ဒုခ ဆိုတာလိပ်စာမမူပဲ ကိုယ့်ဆီရောက်လာနေကြပါ အားတင်းထားပါ ဇွဲမလျှော့ လိုက်နဲ့
10/10/09 10:33 AM
အားတင်းထားပါ . . . . ဇွဲမလျှော့လိုက်ပါနဲ့
10/10/09 10:34 AM
လောက ဟာ ပိုပြီး နာကျင်စရာကောင်းလာတယ်
ဒါပေမယ့် ကိုယ့်အိမ်မှာ ဘယ်သူမှမရှိဘူး
ဘယ်လိုသီချင်းမျိုးကိုမှတောင် ခံစားဆိုညည်းနိုင်စွမ်း တကယ်မရှိတော့လို့ တက်ဂ်ပို့စ်တောင် မရေးနိုင်ခဲ့ဘူး
နှလုံးသားတွေနွေးထွေးရင် ဒါဟာလည်း အိမ် တဲ့
မောင်နှမတွေနဲ့ချစ်ခင်စွာနွေးထွေးနေတဲ့ နေရာလေး ကလည်း အိမ်ပါပဲ ...
ခိုင်မြဲတည်တံ့နေမယ့်အိမ် ဆိုတာ ဒီတစ်ခုပဲရှိပါလိမ့်မယ် ........
10/10/09 10:44 AM
အထက်က ကိုယ့်ထက်နွေးထွေးစွာ အားပေးတက်ကြတဲ့ မောင်နှမ တွေရဲ့ စကားနဲ့တင်
တော်တော် အားတွေရှိနေပြီ ... ဟီး
မမကိုး ခံစားနေရတဲ့အတိုင်း နှင်းလဲ ခံစားရတယ်
ထပ်တူထပ်မျှ နားလည်မိပါတယ် မမရေ...
အရာအားလုံးကို ဥပေက္ခာပြုနိုင်ပါစေလို့ နှင်း ဆုတောင်းပါတယ် .... မမကိုး အဆင်ပြေပျော်ရွှင်ပါစေနော်
အဆင်မပြေရင်...အစ်မအိမ်မှာ လာနေလှည့်။း)
(ကြောင်တော့ ခေါ်မလာနဲ့နော် )
အိမ်လွမ်းသူချင်းအတူတူ မမမယ်ကိုးက ရေးလိုက်မှ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ထက်ကို ပိုသနားမိသွားတယ်....
စိတ်မကောင်းဘူး ဒါပေမယ့်လည်း ဘယ်တတ်နိုင်ပါ့မလဲလေ... နော့...
အရေးအသားတွေကောင်းသလောက် ပိတ်လှောင်ဆို့ကြပ်နေတဲ့ မွန်းကြပ်မှုတွေကို ထင်ထင်ရှားရှားတွေ့မြင်လိုက်ရလို့ စိတ်မကောင်းဘူးညီမလေးရေ...
အကိုတို့အားလုံးနီးပါးဟာ မွန်းကြပ်ပိတ်လှောင်နေကြရတဲ့သူချည့်ပါ ညီမလေး
အသက်တွေကြီးလာလေ လူ့ဘဝရဲ့ဒုက္ခပေါင်းစုံကိုပိုပြီးတွေ့ရ ခံစားရလေပါပဲ ညီမလေးရယ်..
ကိုယ်ချစ်တဲ့ မြတ်နိုးတဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အချိန်တွေကို
ကိုယ်မချစ်တဲ့သူတွေရဲ့ လက်ထဲအရောက် ရောင်းချနေကြရသူတွေချည့်ပါပဲ..ကိုယ်ပိုင်တဲ့အချိန်တွေဆိုတာ တကယ်တော့ ကိုယ်မပိုင်ဖို့ဖြစ်လာရတဲ့ အချိန်တွေပါပဲ...
ကံမကောင်းခြင်းအကြိမ်ကြိမ်အခါခါထဲမှာပဲ ကံကောင်းခြင်းတကြိမ်တခါကို မဲဖောက်သလိုဖောက်နေကြရတဲ့ လူ့ဘဝမှာ မွန်းကြပ်မှုဆိုတာက ဘယ်သူမှရှောင်လွှဲလို့မရနိုင်တဲ့ ထိပ်တိုက်ရန်သူတပါးပဲလေ.
ဒီတော့ ထိပ်တိုက်တွေ့လာတဲ့ရန်သူကို ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်ပစ်လိုက်ကြရုံပေါ့..
10/10/09 1:20 PM
ခံစားနေရတာတွေကို မညှာမတာပြောတာမဟုတ်ပါဘူးနော်။ အပြင်လူတွေအနေနဲ့က ဘာကိုလုပ်ပါ၊ ဘယ်လိုနေကြည့်ပါဆိုတဲ့ အကြံညာဏ်တွေသာပေးနိုင်တာလေ။ တကယ်ခံစားရတော့ကိုယ်တစ်ယောက်ထဲပဲလေ နော်။ ဒါပေမယ့် တခါတလေဘာကိုမှ ကိုယ်မမြင်နိုင်တော့လောက်အောင် ခံစားနေရတဲ့အခါ သူတို့ရဲ့စကားတွေကပဲ စိတ်ဖြေရာဖြစ်လာနိုင်တာပဲလေ နော်။ ကိုယ့်ထက်အများကြီး ဆိုးဆိုးရွားရွားခံစားခဲ့ရ၊ ခံစားနေရကြတဲ့သူတွေကို တွေးမျှော်ကြည့်ပါ။ သူတို့ကို ကိုယ်ခံစားရတာသက်သာအောင်လို့ ဓားစာခံလုပ်ခိုင်းတာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့်လည်း တခါတလေကျရင် သင်းဘောမြုပ်လို့လူတွေအများကြီးသေသွားတာကို ကိုယ်ခေါင်းအရမ်းကိုက်နေချိန်မှာလာပြောရင် ခံစားပေးနိုင်စွမ်း၊ သနားနေနိုင်စွမ်းမရှိနိုင်ဘူးလေနော်။ ဒါလည်းကိုယ့်အပြစ်မှမဟုတ်တာ။ မယ့်ကို ချစ်တဲ့သူတွေရှိပါတယ်ကွယ်။ ပျော်အောင်နေနော်။
စိတ်ကို တအားကြီးငယ်မပစ်လိုက်ပါနဲ့ 
ပြီးတော့ သိပ်မခံစားပါနဲ့ အစ်မရာ တအား ပင်ပန်းပါတယ် ..... ကျွန်တော်တော့ ဒီလို ခံစား မိတဲ့အခါတိုင်း ဖြစ်နေတာတွေ ရလာတာတွေကို လက်ခံနိုင်ဖို့ ပဲ လုပ်ယူလိုက် တယ် ... ဘာလို့ လဲဆိုတော့ မခံစားနိုင်ဘူးဗျာ .... နောက်မုန်တိုင်းတွေရပ်တန့် သွားတဲ့အခါ နေရောင်လေး ကို ကြည့်ဖို့ အားတွေကျန်နေ ဖို့ လိုသေးတယ်မလား
မျှော်လင့်ချက်တွေ မွေးဖွားလာပါစေ .....
စာမေးပွဲနီးလို့မို့ ခေါင်းထဲကို အတွေးတွေက ဟိုရောက်ဒီရောက် ရောက်လာနေတာပါ...
10/10/09 8:11 PM
ဒါပေမယ့် အဲဒီအထဲမှာ ပါနေတာပဲလေ၊
Be Strong be strong တဲ့။
မမတော့မသိဘူး. နေ့အိပ်မက်တောင် စာဖတ်ရင်း မျက်ရည်ကျချင်လာတယ်.... ကိုယ်ပိုင်အ်ိမ်ရယ်လို့ဖန်တီးပြီး ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိလာတဲ့အချိန်ကျရင် အပြုံးတွေဝေနေတဲ့ အိမ်တစ်လုံးပိုင်နိုင်အောင်... မမအခုအားတင်းထားလိုက်ပါနော်..
Wow!!! Sis!I love this song. It's one of her best. Its definitely aboutafriend just watching her friends life go down the drain. Not being able to do very much since obviously this person doesn't want help or the friend just isn't trying very hard.
"She's lost inside, lost inside...oh oh.
She's lost inside, lost inside...oh oh..yeah."
When I hear this part, I simply feel that this girl has fallen so deeply in her own self that she has lost the connections with those that could love her.
You should hear the live acoustic version that has some good shizit.
11/10/09 12:53 AM
လာရောက်အားပေးသူများကို အထူးကျေးဇူးတင်ကြောင်း အရင်ပြောပါရစေရှင် ...
စာဖတ်သူများ<< စာက လုံးဝမချောတာ သိပေမယ့် ဒီရက်လေးအတွင်းမှာ တင်ချင်လွန်းလို့ တင်ဖြစ်သွားတဲ့ အတွက် စာဖတ်သူတွေကို အထူးတောင်းပန်ပါတယ်။
jeujue <<< အခုလိုအားပေးတာ အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ သူတပါးကို မမြင်ကြည့်နိုင်ဘဲ ကိုယ့်အနာပဲကိုယ်သိတဲ့ အတ္တကြီးသူမျိုး မဖြစ်အောင် ကျွန်မ ကြိုးစားနေနေပါတယ်။ =)
ကိုလူထွေး။ ချစ်မလေး မမေ
။သူငယ်ချင်းလေး ကြည်ဖြူပိုင်။ညီမလေးဝက်ဝံလေး။ ညီမလေး angle shaper။ ညီမလေး စိမ်း။
ညီမလေးနှင်း။ ညီမလေး ကာရံဆူး။
ညီမလေး နေ့အိမ်မက်။ ကိုရန်ကုန်သားတို့ကို အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
အိမ်လာလည်ဖို့ ခေါ်တဲ့ အတွက် အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ နောက်မှ ဧည့်သည်က အစားပုတ်တယ်ဆိုပြီး ကန်မချဘူး ထင်ပါတယ် :P
အစ်မမိုးချိုသင်း။အစ်ကို ဆောင်းယွန်းလ။ အစ်မ မနော်ဟရီ။ အစ်မအိန္ဒြာ>>
မယ်က ချော်လဲတော့ မငိုဘဲ အမေ လာထူချော့မှ ရင်ဖွင့်ငိုတဲ့ ကလေးလို ကွန်မန့်လေးတွေ ဖတ်ပြီး တော်တော်ကြေကွဲနေတဲ့ ကလေးဆိုးကြီးဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုသဘောထားကြီးတဲံ့ အစ်ကို အစ်မတွေက သည်းခံပြီး ချစ်ခင်ပေးတဲ့ အတွက် အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ဆရာမ အပြုံးပန်း >> သီချင်းလေးကို ပိုခံစားပြီး နောက်တစ်ခေါက်လာအားပေးတဲ့ အတွက် အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ တဂ်တာလေးကို အခြေခံပြီး ရင်ထဲရှိတာတွေ ကပေါက်တိကပေါက်ချာ ကရောကပါး ရေးမိတာမို့ သီချင်းလေးကို သေသေချာချာ မဖွင့်ဆိုနိုင်ခဲ့အတွက် အထူးတောင်းပန်ပါတယ် ။
ကိုမင်းအိမ်ဖြူ<< တစ်ခါတစ်လေ ဘာသာဗေဒမတူတဲ့အခါ လေထုအစ အရောင်ကွဲနေတတ်ပါတယ်။ ရေလိုက်ငါးလိုက်နေချင်ပေမယ့် အသက်ရှုကြပ်တတ်မိတာမို့ ဒီလိုပဲ ပုန်းရှောင်နေမိဆဲမို့ ဒိလိုပဲ ကိုယ့်အဆိပ်နဲ့ပဲ ကိုယ်သတ်နေမိတာ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
ကိုဗညားရှိန်<< comment မတက်ဘူးဆိုပြီး အပင်ပန်းခံပြီး အထပ်ထပ်ရေးအားပေးတဲ့အတွက် အထူးအားနာကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ကိုယုယ<< ဒီသီချင်းရဲ့ live acoustic version တော်တော်များများက တော်တော်ကောင်းပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်မက vocal ထက် သီချင်းသံစဉ်ဖွဲ့စည်းမှုကို ပိုနှစ်သက်တတ်သူမို့ မူရင်းကိုပဲ ရွေးချယ်လိုက်တာပါ။
အားလုံးကို အထူးအားနာကျေးဇူးတင် ချစ်ခင်ပါတယ် =)
11/10/09 7:45 AM
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်.. ဘာပဲဖြစ်နေဖြစ်နေ.. အားတင်းထားဗျ
လူဆိုတဲ့အမျိုးကလည်း မသွားမချင်း ဒါမျိုးတွေက ကြုံနေကြရမှာလေ..
ငါးဆယ် ငါးဆယ် ဖြစ်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်..
မိမိကိုယ်မိမိ အပစ်ပုံချတတ်တာ လူ့သဘာဝပဲလေ
ကျွန်တော်လည်း အခုလိုမျိုးဖြစ်နေလို့ပါ .. နေတတ်အောင် ကြိုးစား နေပါတယ်..
အခက်ခဲ မကြုံဖူးသူတစ်ယောက်ဟာ အခက်ခဲ နည်းနည်းလေးတွေ့လိုက်တာနဲ့ လောကမှာ သူကပဲ ဒီလိုဖြစ်နေရတယ်လို့ ခံယူတတ်ပါတယ်..
အခက်ခဲပေါင်း မြောက်များစွားကို ကျော်ဖြတ်လာသူတစ်ယောက်အဖို့ကတော့ သူ့မှာ ဘယ်လိုဖြေရှင်းရမလဲ ဆိုတာကို တွေးနေမှာပါ..
11/10/09 1:34 PM
မယ်ကလေးရေ...မယ့်ကို အတ္တကြီးသူလို့ ဆိုလိုလိုက်တာမဟုတ်ရပါဘူး။ စာရှည်သွားမှာစိုးတဲ့အတွက် ရေးလိုက်တာမပြည့်စုံသွားလို့ ပေးတဲ့ဥပမာက အဓိပယ်တစ်မျိုးပေါက်သွားတယ်။ ခေါင်းကိုက်နေတဲ့သူလည်း သူ့လျောက်တော့ သေလုအောင်ခံစားနေရမှာပဲလို့ ဆိုလိုချင်တာပါ။ ပေါ့စေလိုလို့ကြောင်ရုပ်ထိုးကာမှဆေးကြောင့်လေးသွားတာမျိူးဖြစ်စေခဲ့လို မယ်စိတ်ရှုပ်သွားရရင် ကိုယ့်ကို ခွင့်လွှတ်ပါလို့။
ဒီပို.စ်လေး ဖတ်ပြီး စိတ်မကောင်းဖြစ်တာတော့
အမှန်ဘဲ အမရာ . . . အားပေးစကားလေးတွေက
လွယ်ကူနေပေမဲ့ ခံစားနေရတဲ့ ကာယကံရှင်အမ
အတွက်တော့ တကယ့်ကို ဧရာမ ကြီးဖြစ်နေမှာပါ
ဗျာ . . . တိုင်းတပါးမှာ အခက်အခဲများစွား ပင်ပန်း
ဆင်းရဲမှု များစွာ ဒီကြားထဲ စိတ်ဒုက္ခခံစားရတာတွေက
ပိုလို့ဆိုးတယ်ဆိုတာ ကိုယ်ချင်းစာပါတယ် အမရေ . . .
မjeujue << မရဲ့ စေတနာစကားကို မယ် တကယ့်ကို နားလည် အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နောက်ဆို စိတ်ကလေးကို ဆင်ခြင်ပါ့မယ်လို့ ဆိုလိုချင်တာကို မယ်ကိုယ်တိုင် အပြောမတတ်တဲ့အတွက် မ စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်သွားရင်လည်း အထူးတောင်းပန်ပါတယ်။
11/10/09 10:29 PM
သော့ပိတ်ထားတဲ့ ခြံတခါးနဲ့ ဖွင့်ပေးမယ့်သူမရှိတဲ့ အိမ်တံခါးပဲးရှိတယ်..
11/10/09 10:47 PM
အိမ်ပြန်ရင် သော့ပိတ်ထားတဲ့ ခြံတခါးနဲ့ ဖွင့်ပေးမယ့်သူမရှိတဲ့ အိမ်တခါးပဲးရှိတယ်
11/10/09 10:51 PM
အားပေးစကားတွေ ရင်ထဲကနေ ပြောနေမိပါတယ်..
း) အဲ့ဒီအပြုံးကို အားပေးတဲ့ အပြုံးအဖြစ် မြင်ပေးပါ..
11/10/09 11:06 PM
အကောင်းဆုံးကို မျှော်လင့်ကြတာပေါ့ အဆင်ပြေသွားမှာပါ။
သူငယ်ချင်း အဆင်ပါစေလို့ပဲ ဆုတောင်းပေးခဲ့ တော့မယ်။
သူငယ်ချင်းမှာ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ထူမတ်နိင်တဲ့ စွမ်းအင်တွေ ရှိမှန်းယုံကြည်ပါတယ်။
13/10/09 12:55 AM
မမရေ စာပြန်ရေးနေတာ သ်ိလို့ ဝမ်းသာမိပါတယ်။
အိမ်ဝေးနေတဲ့ သူချင်းမို့ ကိုယ်ချင်းစာမိပါတယ်မမရေ
ဒီတစ်ကွေ့ကျော်ရင် မမလိုရာ ပန်းတိုင်ရောက်ပါပြီ မမရေ
အားတင်းပါလို့ ပြောရမလား ...
မမယ်ကိုးကိုလင့်ထားပါတယ် ခွင့်ပြုနော် ..
15/10/09 6:01 PM
မမရေ ...... စာလေးတွေ ဖတ်ရင် သီချင်းလေးကိုလည်း နားထောင်သွားပါတယ်။
ရှေ့ဆက်ရမယ့် အနာဂတ်တွေ အတွက် ခွန်အားတွေ ပြည့်ဝအောင် ကြိုးစားပါနော်။ အားမပေးတတ်ပေမယ့် အားပေးခဲ့ပါတယ် မမ။
19/10/09 1:07 AM
အရာအားလုံးဖြတ်ကျော်နိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းသွားပါတယ်။
20/10/09 4:43 PM
အကြိုက်ဆုံးစာကြောင်းရယ်လို့ ချပြစရာမရှိတာ စိတ်မကောင်းစရာပဲ .. အကုန်လုံးက သူ့ထက်သူ လှနေတာကြီးရယ်ကို .. စိတ္တဇနာမ်တွေနဲ့ ဖွဲ့သီထားပြီး သီချင်းလှလှလေးတွေနဲ့ တွဲစပ်လိုက်တော့ .. ကဗျာလို့ပဲ ပြောရမှာလား .. စာလို့ပဲ ပြောရမှာလား .. ခံစားချက်လို့ပဲ ပြောရမှာလား ..
အာ .. ရှုပ်ပါတယ် ..
အကုန်လှတယ်ဗျာ .. အကုန်ကြိုက်တယ် .. =)
29/10/09 2:48 PM